Landa ividiyo ye-InShot ye-PC- IWindows7, 8, 10 & IMac Mahhala
Yeqela eseceleni eyinhloko
Download FaceTime Okwe-PC Window, Mac, Chromebook ne-iPad
InShot Video Isihleli se-PC – lwe-Windows & Mac
Mashi 24, 2021 ngu Umhlahlandlela Wokuqondisa Shiya umbono
InShot Video Isihleli se-PC (I-Windows ne-Mac) -U-downloader mahhala
Isihleli sevidiyo se-Inshot uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokuhlela isithombe nevidiyo ongakaze ulubone ngaphambili. Izinkulungwane zezinhlelo zokusebenza zokuhlela ividiyo ziyatholakala ku-Google Play Isitolo kodwa Isihleli sevidiyo se-InShot yenza ukulandwa okukhulu ngesikhathi esifushane.
Yakhelwe ngokukhethekile ukulayishwa amavidiyo ku- Amakhasi we-Instagram. Isebenziseka kalula futhi ungahlela kalula izithombe namavidiyo wakho.
Kulesi sihloko, Ngikunikeza umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo mayelana “ungalanda kanjani i-InShot App yamahhala ye-Windows ne-Mac?”
Sicela ubheke i-athikili mayelana “ungalanda kanjani futhi ufake i-InShot App ye-Windows ne-Mac mahhala?”
Bheka uhlelo lokusebenza lwe-UseFul lwe-PC
Uhlelo lokusebenza lwe-wyze cam lwe-pc
ifoni pe ye-pc
vms 4500 nge-pc
i-vidmate yamawindi e-pc 7
isikhathi sobuso kukhompyutha
1 Landa futhi ufake- InShot Video Isihleli se-PC
1.1 Izinzuzo ze-InShot ye-PC:
1.2 Okuningi kusuka kusayithi lami
Landa futhi ufake- InShot Video Isihleli se-PC
Ukuze ukulanda mahhala nokufakwa kwe-Inshot App, Udinga ukulandela lezi zinyathelo kuphela.
I Uhlelo lokusebenza lwevidiyo lwe-InShot ingasebenza nenye yesoftware ehambisana nayo ukulawula ikhamera nemidwebo yevidiyo yayo. Ngenxa yale njongo, udinga isikhulu kuphela Uhlelo lokusebenza lwe-InShot ye-PC.
Ngaphambi kokuqala inqubo yokufaka ye- Uhlelo lokusebenza lwe-InShot uhlelo lokusebenza lwamawindi, khumbula ukuthi kufanele ufake i Isipele se-Android, njengamaBluestacks, I-Nox App Player, noma i-Xeplayer.
Ungalandela lezi zinyathelo ezilula ukuze Landa i-InShot App ye-PC bese ufaka uhlelo lokusebenza kukhompyutha yakho. Ngomusa landela izinyathelo bese ufaka i-Wyze App.
Ekuqaleni, landa futhi ufake i-emulator ye-Android efana BlueStacks ku-PC yakho kuwebhusayithi yabo https://www.bluestacks.com/.
Ngemuva kokulanda i-emulator, you have to run the emulator app on windows. Chofoza isithonjana se-emulator yakho ye-Android ukuyisebenzisa.
Dala i-akhawunti ku-emulator bese uzama ukungena ngemvume.
Ngaphandle kwalokho, kufanele ungene ngemvume ku-akhawunti yakho yesitolo se-Google Play.
Manje, sesha uhlelo lokusebenza lweWyze ku Isitolo seMidlalo. Khetha i- Uhlelo lokusebenza lwe-InShot Video Editor bese uqhafaza faka.
Sibutsetelo se- Isihleli sevidiyo se-InShot
Isihleli sevidiyo se-InShot iyi- uhlelo lokusebenza oluhle lokuhlela ividiyo olusiza ukulayisha amavidiyo akho egciwane ekhasini le-Instagram.
Kwesinye isikhathi awuthandi amavidiyo amaphakathi futhi ukhetha ukufaka amavidiyo ahleliwe ngenxa yekhwalithi ephansi. Amavidiyo akho asakazeka lapho okuqukethwe kwakho kuhlekisa.
I Isihleli sevidiyo se-InShot ifaka imisebenzi enesithunzi yokuhlela. Uma wenza iMEMS futhi udala umbhalo kumavidiyo usebenzisa lokhu Isihleli sevidiyo se-InShot.
Izinzuzo ze-InShot ye-PC:
Lapha ungabona izinzuzo ze Isihleli sevidiyo se-InShot etholakalayo mahhala esitolo sokudlala se-Google.
Ungalayisha amavidiyo akho kufayela lakho le- Ikhasi le-Instagram ngekhwalithi ephezulu.
Ungakwazi nquma usike bese wengeza umbhalo kumavidiyo akho.
Ungaguqula ukugqama kwamavidiyo nokulawulwa kwejubane.
Ungabelana ngamavidiyo akho ezinkundleni zokuxhumana.
Futhi, ungasetha amavidiyo akho ngezinhlobo ezahlukahlukene zokulinganiswa kwesici.
Ngokusebenzisa inketho yokuhlunga ungangeza isitayela se-movie kumavidiyo akho.
Ungenza amavidiyo ahamba kancane bese uguqula ividiyo in Ifomethi ye-MP4.
Enza ngendlela oyifisayo izilungiselelo zakho nezinketho zokulawula ividiyo.
Lezi yizici ezinhle kakhulu zefayela le- InShot Video Isihleli se-PC. Ungalanda futhi ufake Uhlelo lokusebenza lwe-InShot lwe-PC futhi ujabulele izici zayo.
Siyabonga ngokufunda le ndatshana, Ngiyethemba uyayithanda futhi nakanjani izokusiza landa i-InShot App yeWindows ne-Mac.
Namanje, Uma unemibuzo mayelana okufanayo, bese uhlanganyela ngomusa ku- ibhokisi lokuphawula. Ngaphezu kwalokho, ufuna ezinye izinto, unganqikazi ukungithinta. Ngijabule njalo ukukusiza.
Okuningi kusuka kusayithi lami
Iskena Sokuphepha SeMicrosoft Se-PC Windows 10/8/8.1/7 - Landa inguqulo yakamuva
Download Easy Poser for PC Windows 7,8 futhi 10
Landa i-Wyze App ye-Windows Free Window 7, 8 futhi 10
Landa iMegacast yePC [lwe-Windows 10, 8, 7 ne-Mac]
I-ApowerPDF Ye-PC Windows 10/8/8.1/7 - Landa inguqulo yakamuva
I-Gramblr Ye-PC Windows 10/8/7 - Landa inguqulo yakamuva
Ifayelwe Ngaphansi: Download FaceTime Umakiwe Nge: Landa i-InShot App ye-PC, Uhlelo lokusebenza lokulanda mahhala lwe-inshot, Ukulanda uhlelo lokusebenza lwe-Inshot bese ulifaka, Ukulanda uhlelo lokusebenza lwe-InShot lwe-PC, InShot For Windows 7/8/10 & Mac, Uhlelo lokusebenza lwe-Inshot video editor online
Londoloza igama lami, imeyili, futhi iwebhusayithi kulesi siphequluli for ngokuzayo uma ngingena amazwana.
ibha eseceleni Primary
Sesha isayithi ...
Ungayisebenzisa Kanjani i-Apple Watch Yomculo Ngaphandle Kwefoni
Ungayifaka Kanjani Futhi Uyisebenzise Ngezikhathi Zokusebenza Ku-Mac
Landa iTurbo VPN ye-PC Window 7, 8 & 10
Landa i-Pubg For PC Window 7, 8 futhi Iwindi 10
Landa i-PC yesikhathi esithile nge-PC
es ifayela elihlola i-pc
Imininingwane © 2021 · Magazine Pro ku Genesise Framework · WordPress · Ngena ngemvume
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa umuzwa wakho. Sizocabanga ukuthi ulungile ngalokhu, kepha ungaphuma uma ufisa. Izilungiselelo zamakhukhiVUMELA
Amakhukhi adingekayo abalulekile ukuze iwebhusayithi isebenze kahle. Lesi sigaba sifaka amakhukhi aqinisekisa ukusebenza okuyisisekelo kanye nezici zokuphepha zewebhusayithi. Lawo makhukhi awalugcini ulwazi lomuntu siqu.
Noma yimaphi amakhukhi angahle angadingeki kakhulu ukuze iwebhusayithi isebenze futhi asetshenziswa ngqo ukuqoqa idatha yomuntu siqu nge-analytics, izikhangiso, okunye okuqukethwe okushunyekiwe kubizwa njengamakhukhi angenasidingo. Kuphoqelekile ukuthola imvume yomsebenzisi ngaphambi kokusebenzisa la makhukhi kuwebhusayithi yakho.